DST (Direction de la Surveillance du Territoire) indray izao no anarana malaza.	Hamaky ny tohiny...	Politique
Nampitovy tadin-dokanga ireo fahavalon-dRavalomanana
Nanatontosa fivoriambe tetsy amin'ny Mon Gouter Andrefan'Ambohijanahary ny UDR-C omaly.
Mbola ao ihany ve ireo mpanatanteraka ?
Efa herinandro vitsivitsy izao no tsy nisiana Filankevitra intsony, na io ny an�ny governemanta na ny an�ny minisitra.
Mankahery ireo niharam-boina, niantso ho amin�ny fifanampiana
�Tsy hitako izay fomba hilazako ny alaheloko noho izao voina mihatra amin�ny firenena sy ny Malagasy izao�, hoy i Marc Ravalomanana raha niditra tamin�ny alalan�ny antso an-tariby avy atsy Afrika Atsimo nandritra ny hetsiky ny mpomba ny ara-dal�na tao amin�ny Magro Behoririka.
�Tsy afaka hanao takalon�aina mpianatra aho�
Nisafidy ny hampianatra aho fa tsy hitokona eny amin�ny oniversite, hoy i Pierre Andrianantenaina mpampianatra mpikaroka eny amin�ny oniversite sady mpikambana ao amin�ny Filankevitra ambonin�ny tetezamita (CST), satria tsy afaka hanao takalon�aina ny mpianatra.
Tsiv�ka Raharison Sylvien
�Fitoniana aloha vao fifidianana...�
Tsy ho tratra ny daty notondroin�ny vondrona iraisam-pirenena, ny 29 febroary izay daty farany tokony hahavitan�ny lal�nan�ny amnistia raha izao no fandehany, hoy ny filoha lefitr�i Antsiranana eo anivon�ny Kongresin�ny tetezamita, Tsiv�ka Raharison Sylvien.
Hamory vahoaka etsy Andrefan�Ambohijanahary
Noho ny fahatsapana ny fahasahiranan�ny firenena sy ny tsy fivahan�ny krizy araka ny nandrandrain�ny rehetra dia mihetsika indray ry zareo mpikatroka kung fu mivondrona eo anivon�ny ANAWI, izay tarihan�ny Maitre Avoko Rakotoarijaona.
Rovan�Ambohimanga Nadabok�i Giovanna ireo hazo manan-tantara
Mahatonga saina sy mampanahy ny zava-mitranga eny amin�ny Kaominina Ambohimanga amin�izao fotoana.
Tsy aritra Tsy vonona ny hamonjy ?
Raha jerena mivantana ety ivelany dia hita fa niasa tokoa ny mpamonjy voina ao Tsaralal�na amin�ireo fanalana ny hazo mety handratra eny amin�ny lalana tamin�ny fandalovan�ny rivodoza ny 14 febroary 2012 lasa teo.
Tonga ny antso !
Araka ny fanambaran�i Mamy Rakotoarivelo omaly, dia manaiky ny handray anjara amin�ny fanelanelanana ireo ankolafy politika isan-karazany ho amin�ny fikaroham-bahaolana hivoahana amin�ny krizy ireo mpikambana ao amin�ny FFKM.